Non classé Archives · déliremadagascar
Non classé	 10 mai 2022 R Nirina
FIKAMBANANA ASSANATI FAMO GIDRAKA : Tsy manadino ny mpanao gazety
Mi-werawera amin’ny asa soa. Anjaran’ny mpanao gazety rehetra eto Madagasikara indray no ahazo vola amin’ity indray mandeha ity izay omen’i Assanati Naboana, Filoham-boninahitry ny Fikambanana assanati Famo Gidraka. Continuer la lecture →
Non classé	 4 mai 2022 R Nirina
SAMOELA SY RABOUSSA : « Revy milay be »
Hanakoako ny tonon-kira mahitsy sady mivantana. Sambany no hiaraka hampirevy ny mpankafy ao antsahamanitra i Samoela sy Raboussa. Continuer la lecture →
Non classé	 20 juin 2018 R Nirina
« Tafio izy »
Hetsika tsy miankina amin-na antokom-pinoana na antoko politika; ary tsy manavaka na iza na iza… Continuer la lecture →
Non classé	 18 juin 2018 R Nirina
Manorina fahatokisana an’ireo manam-pahaizana momban’ny fikajiana ny tontolo iainana i Madagasikara
ANTANANARIVO, Madagasikara. Anisan’ny mitaky faharetana ny fanavatsavana ny ala mando mandritra ny alina mba hamandrika fanihy sy hamerina azy any anaty tranony fonenany rehefa mazava ny andro. Ary azo antoka fa manana anjara toerana lehibe ny fahaizana mitady hevitra tao anatin’ny fandalinana vao tsy ela akory izay hijokoana ireo mpanao varo-maizina ny henam-bibidia nohazaina. Karohana hatrany anaty fako ny karaokan-tsokatra mety narian’izy ireo.
Anisan’ireo niara-namolavola izany ezaka tsirairay avy izany i Julie Hanta Razafimanahaka. Raha anontanianao azy anefa ny antony nahatonga azy ho biôlôjista eto Madagasikara, hafa mihitsy ny valinteny ho renao. Izao no voalazan-dRazafimanahaka: “Voalohany indrindra dia mila manam-bintana ianao” ary tsy maintsy mahay mifandray aman’olona ihany koa. “Tsy midika akory izany fa tsy misy ny vintana nefa kosa tena tsy maintsy mifampiresaka amin’olona maro ianao indrindra amin’ireo mpikaroka manana pasipaoro vahiny. Nandray anjara tamina tetikasa fikarohana momban’ny fanihy i Razafimanahaka. Lasa lohahevitry ny asa fikarohana nataony hahazoany ny marim-pahaizana “master” ao amin’ny taona fahadimy izany. Tsy satria noho ny fahalianany manokana tamin’izany anefa, hoy izy mampahatsiahy fa mba ahafahany mifandray amina Anglisy mpanao fikarohana avy any Pays de Galles izay nanao asa fikarohana tany amin’ny toerana tiany indrindra teto Madagasikara momban’ ny fiforonan’ireo harambato marani-doha ao amin’ny Valam-Pirenena misy ny Tsingin’i Bemaraha.
Adansonia grandidieri, karazana reniala arovan’ny Madagasikara Voakajy ankehitriny. Sary nalain’i Bernard Gagnon, nalaina tao amin’ny Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0.
Mbola nahatsiaro izany lalana nodiaviny sy fihaonana izany izy dimy ambin’ny folo taona taty aoriana. Anisan’ireo tetikasa maromaro tantanan’ny mpampianatra mpikaroka any amin’ny oniversiten’i Aberdeen ny Tsingin’i Bemaraha. Tohanan’ny fanjakana Britanika ho fanatsarana ny « Curriculum Vitae » sy hanomezana traikefa ireo biôlôjista Malagasy vao misandratra mba hiasa ao anatin’ny sehatry ny fiarovana ny fanihy. Rehefa vita anefa ny fikarohana ifotony tamin’ny taona 2004, hoy Razafimanahaka nahatsiahy, very asa izy sy ireo namany. Toa nahatsapa izy ireo fa tsy misy tombony ho an’i Madagasikara akory ny asa fikarohana nandraisan’izy ireo anjara. Ankehitriny dia mitantana ONG mitondra ny anarana hoe Madagasikara Voakajy i Razafimanahaka niorina tamin’ny taona 2005. Tsapany fa tombontsoa ho azy ny nahafahany manaraka ireo toromarika mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana voatanisa ao anatin’ireo asa soratra akademika mikasika an’i Madagasikara izay matetika toa afenina.
Miasa amin’ny toerana fito kelikely manerana an’i Madagasikara ny ONG ankehitriny ary nanampy tamin’ny fanaovana ireny toerana ireny ho lasa faritra arovana. “Nisy mpanao fikarohana niasa tamin’izany toerana izany teo aloha” hoy Razafimanahaka hatrany nanazava mikasika ireo toerana hiasan’ny Voakajy. “Ary heveriko fa toy izany avokoa ny any amin’ny toerana rehetra eto Madagasikara. Tonga manao fikarohana ireo mikaroka vahiny kanefa amin’ny ankapobeny tsy miverina eto hanazava izay voka-pikarohany akory izy ireo. Izao kosa no mampiavaka izany any amin’ireo faritra arovana hiasanay. Nanao fikarohana teo izahay ary niverina mba hiresaka amin’ny vahoaka mikasika ny voka-pikarohanay. Rehefa izany nifanakalo hevitra tamin’izy ireny momban’ izay tokony atao manaraka. Ary izany indrindra no ataonay ankehitriny,” hoy izy. “Heveriko fa mitondra fahasamihafana lehibe izany.”
Taona vitsy lasa izay, nihamaro ny mpikajy ny tontolo iainana izay nanentana ny mba hisian’ny Malagasy mpitarika amin’ny fanaovana fikarohana eo an-toerana. Namafisin’izy ireo tamin’izany fa ny asan’ireo mpahay siansa Malagasy dia miorim-paka indrindra amin’ny politikan’ny fikajiana sy ny fampiharana izany mandritra ny fotoana maharitra. Na dia niahotra aza Razafimanahaka tamin’ny voalohany, hita tamin’ny asa famoronana ny tetikasa Voakajy fa misy akony mandritra ny fotoana maharitra ny fiarahamiasa amin’ny any ivelany. Ny fiarahamiasa natomboka vao tsy ela akory tahaka izay natao mba hanampiana tosika ny Voakajy. Nanampy teo amin’ny fampiroboroboana ny tontolon’ny asan’ireo mpahay siansa Malagasy izany. Ny mpikaroka toa an-dRazafimanahaka ohatra dia niala tsikelikely tao an-damosin’ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombon’antoka vahiny. Ny halavirana ho todin’ny taranaka aty aoriana kosa anefa no miankina amin’ny haben’izay azo atao mba hanamafisana orina ny rafim-pampianarana ambony eto Madagasikara.
Nibahan-toerana ny vahiny avy any ivelany
Fitaovana mampandroso ny famoronana sy ny fitantanana ny faritra arovana ao Madagasikara ny vahiny ary amin’ny famaritana ireo laharam-pahamehana amin’ireo zavatra kajiana eo amin’ny firenena. Nanomboka tamin’ny fanadihadiana ifotony voalohany nataon’ireo misionera sy ny mpanjanatany mpanao fikarohana tamin’ny fiandohan’ny taonjato faha-16 ka hatramin’ireo biôlôjista Amerikana nanampy tamin’ny fanohanana ny firenena nandritra ny famolavolana ny tetikasam-pirenena mandritra ny taona ho an’ny tontolo iainana (National Environmental Action Plan) taty amin’ny faraparan’ny taona 1980 sy fiandohan’ny taona 1990.
Ny hery miasa mangina avy amin’izy ireo kosa, misongadina ao anatin’ny asa soratra ara-tsiansa mikasika an’i Madagasikara. Araka ny fikarohana natao vao tsy ela izay, navoakan’ny gazety PLOS ONE amin’ireo 4000 ny mikasika ny biôdiversite nanomboka tamin’ny taona 1960 hatramin’ny 2015. Maherin’ny 90% voka-pikarohana navoakany dia asa soratry ny mpanoratra avy amin’ny toeram-pampianarana ambony any ivelan’i Madagasikara avokoa. “Tsy afaka mitaha amin’ny fenitra maneran-tany ny oniversite Malagasy,” hoy ny mpanoratra. “ Ireo mpikaroka eo an-toerana zara raha mandray famatsiana ara-bola kely dia kely ka tsy manan-tsafidy afatsy ny hiara-miasa amin’ireo tetik’asam-pikarohana maneran-tany ataon’ireo toeram-pampianarana ambony avy any Eoropa sy Amerika amin’ny ankapobeny… Izany toe-javatra izany anefa dia hisy fiantraikany amin’ny fandrosoan’i Madagasikara ao anatin’ny taona ho avy ary hisy akony lalina eo amin’ny fanabeazana.”
Voka-pikarohana navoaka tamin’ny 2012, mampiseho ny fitongilanana eo amin’ny fandraisan’anjaran’ny mpanao fikarohana vahiny, eo amin’ny fikarohana amin’ny lafiny biôdiversite mahakasika an’i Madagasikara. Sary nahazoana alalana avy amin’i Lucienne Wilmé.
I Lucienne Wilmé, Frantsay niara-nanao io fanadihadiana io, nipetraka tao Madagasikara nandritra ny 30 taona. Nilaza izy fa ny fibahanan-toeran’ny avy any ivelany mametra ny fahafahan’ny fikarohana momba ny biôdiversite tsy hivelatra kokoa ho amin’ny fifanakalozan-kevitra sy ny hery miasa mangina amin’ny vahoaka Malagasy. Ho an’i Amerika sy Eoropa, hoy Wilmé, izay editoran’ny gazety Madagascar Conservation & Development, ny voka-pikarohana avoaka matetika no tonga lahatsoratra an-gazety na tolo-kevitra ara-politika. “Noho izany mbola maro ny zavatra azo atao avy amin’ny voka-pikarohana ara-tsiansa iray”. “Tsy izany anefa no mitranga eto Madagasikara satria any ivelany avokoa ireo lehiben’ny fikarohana. Tena tokony ataontsika mamoaka voka-pikarohana betsaka kokoa ireny toeram-pampianarana ambony sy oniversite eo an-toerana ireny sady mifanakalo hevitra bebe kokoa. Ny teniny mihitsy no ampiasainy amin’izany ary anisan’izany ny teny Malagasy. Ny ankamaroan’ny fikarohana ara-tsiansa anefa dia very ao anatin’ny fandikan-teny avokoa.”
Tonga eny amin’ny oniversite Antananarivo ireo mpianatra. Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay
Ireo akora fototra ilaina amin’ny asa fikarohana
Trano vita biriky sy simenitra niorina efa hatramin’ny antsasaky ny taon-jato no hita mibahan-toerana ao amin’ny oniversiten’Antananarivo izay miorina eny an-tampon-tendrombohitra. Hita ihany koa izany manerana ny tanan-dehibe ka hatreny amin’ilay Rova may. Naorina tamin’ny taona 1842 ho an’ny iray amin’ireo mpanjakan’i Madagasikara Ranavalona I izay malaza indrindra.
Niorina tamin’ny taona 1961 ny oniversite. Volana vitsivitsy taorian’ny nahazoan’i Madagasikara ny fahateovan-tenany tamin’i Frantsa ary hatramin’izao. Io no toeram-mpampianarana ambony voalohany eto amin’ny firenena. Ankehitriny, manana ny oniversiteny tsirairay avy koa ny maro amin’ireo renivohi-paritany eto Madagasikara. Miampy ireo oniversite kelikely any amin’ireo tanàna kelikely kokoa kanefa mihoatra ny atsasak’ireo mpianatra amin’ny ambaratonga ambony no mbola mandeha any amin’ny oniversite lehibe.
Ny oniversiten’ Antananarivo, Departemantan’ny Haiharingarinifahagola sy ny “Anthropologie Biologique.” Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay.
Fanomezana Ratsoavina, manam-pahaizana momba ny biby mandady sy mikisaka an-tanety sy anaty rano no mampianatra ao amin’ny labôratoara kelin’ny sampam-pampianarana momba ny biby. Ahitana baoritra maromaro mifanongoa eo ambony ”paillasse” vita amin’ny “carreau” (karazana latabatra fiasana rehefa manao fikarohana ao anatin’ny labôratoara) mitahiry irony “vases à bec” irony ary boky maromaro mikasika ny mikrôbiolojia sy ny “systématique moléculaire” no mibahan-toerana eo amin’ny lalimoara hazo fitehirizana antontan-kevitra.
Ny fizotry ny lalam-pianarana nodiavin-dRatsoavina tany amin’ny sekoly ambony, samy ahitana soritra mazava ny fivoaran’ny fiarahamonin’ny fikarohana eto Madagasikara sy ireo sakana mifandraika amin’ny rafitra. Mitoetra eo amin’ny lalana fianihana ny tohatohatry ny tontolon’ny siansa avy ao Antananarivo izany.
Fony izy mpianatra tao amin’ny taona fahadimy ny voalohandohan’ny taona 2000, tsaroany ny nikarohany izay asa soratra rehetra mety ho nifandray tamin’ny asa fikarohana nataony tao amin’ny tranombokin’ny oniversite. Ny fivoaran’ny tantaran’ny biby mandady sy mikisaka an-tanety sy anaty rano sy ny fahakiviany raha nahita fa tsy nisy fianarana momban’ny “phylogénie” tao amin’ny oniversite. Anisan’ny takiana amin’ny asa fikarohana niriany hatao io. Nisy mpiara-mianatra taminy iray koa nitantara ny nandikany ireo voka-pikarohana (thèse de master) an-tanana. Avy eo miandry ny fotoana nahafahany nandika izany tao amin’ny solosainan’ny oniversite izay ifampizaran’ny mpianatra enina hafa. “Nandroso be tokoa ny aterineto,” hoy Ratsoavina. « Amin’izao fotoana izao jerena ao amin’ny « google » fotsiny sisa ny zavatra rehetra”. Na izany aza anefa, misy fetrany ny fampiasana ny “Google”. Nilaza Ratsoavina fa tsy ho nahavita nanoratra ny voka-pikarohany (thèse) mihitsy izy raha tsy nanampy azy, ireo mpiara-miasa taminy tany Omaha, Nebraska. Nanampy azy hahazo fanampiana ara-bola ka nahafahany nanao asa an- daboratoara tany. Nampiasainy ireo fitaovana fitiliana ny ADN izay mbola tsy misy eto Madagasikara. Tahaka ny dia nataon’i Julie Razafimanahaka tany amin’ny Tsingin’i Bemaraha, niantomboka tamin’ny asa fikarohana ka nanampy ho an’ireo mpianatra vahiny nahazo vatsim-pianarana ny fifandraisan-dRatsoavina tamin’ireo rafi-pampianarana tany ivelany. “Faly izahay fa misy lalàna azonay tenenina raha toa ka vahiny ianao ary te-hanao fikarohana eto Madagasikara. Tsy maintsy manana mpianatra taona fahadimy miara-miasa aminao mandritra ny asa fikarohana ataonao”, hoy ny fanazavan-dRatsoavina. “Tsy mahazo fahazoan-dalana hanao fikarohana ianao raha tsy misy mpianatra Malagasy na mpanampy eny amin’ny seha-pikarohana miaraka aminao.” Io fepetra io izay efa nampiharina am-polo taonany maro no niantombohan’ny lalam-piainana maha siantifika ny maro any Madagasikara. Miaraka amin’ izany tsy mba manana famatsiam-bola hoenti-manatanteraka asa fikarohana eny ifotony ny ankamaroan’ny mpikaroka Malagasy, hoy ihany Ratsoavina. Na ireo vao misantatra asa na ireo efa am-perinasa. Vokany, matetika no tsy manan-kolazaina firy izy ireo momban’ny asa fikarohana ataony. “Rehefa anananao ny vola ka te-hamoaka ny angon-kevitra ianao, tianao raha ianao no mpanoratra izany voalohany,” hoy hatrany izy . “Manambola hanohanany ny fikarohany anefa ireo vahiny hany ka avelanay fotsiny amin’izao,” hoy izy, raha niresaka momba’ny fankasitrahana sy ny hery fitaomana izay mety hateraky ny fahazoana famatsiam-bola sy ny fitarihana famoahana asa soratra.
Fanomezana Ratsoavina, eo afovoany, ao amin’ny labôratoarany eny amin’ny oniversite, miaraka amin’ireo mpianany manomana ny bokiny ao amin’ny taona fahadimy (thèses de master). Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay.
Ireo profesora rehetra miisa 30 izay namaly ny fanadihadiana tamin’ny 2009 [pdf] momba ireo Malagasy mpanao fikarohana notanterahan’ny “Fondation Internationale pour la Science basée en Suède”. Samy nilaza fa niantehitra tamina vadin’asa izy ireo izay vao ampy ivelomany ny vola eo am-pelatanany. Ireo vondrona ireo ihany izay ahitana karazan-tsehatra mivelatra maro no manana tetibola herintaona natokana ho an’ny fikarohana. Manomboka amin’ny 250 Dôlara ka hatramin’ny 13.000 Dôlara afa-tsy iray ihany izay nanana teti-bola 37.000 Dôlara. Vola azony tamin’ny fanjakana sy rafi-pampianarana vahiny avokoa ny ankabeazany.
Tsy ny vola ihany no elanelana mampihemotra amin’ny fikarohana. Madagasikara dia nosy manana ny fiteny mampiavaka azy amin’ireo nosy manodidina azy. Nosy izay lafo tokoa na ny miditra na ny miala ao aminy. Mitoka-monina koa ity firenena ity hany ka mitombo ny fanamby atrehin’ireo mpianatra amin’ny ambaratonga ambony izay mba miezaka manangona antontan-taratasy mirakitra ireo traikefa arak’asany amin’ny alalan’ny fandraisana anjara amin’ireo famelabelaran-kevitra na ny fiaraha-miasa amin’ireo rafi-pampianarana ambony hafa.
Jonah Ratsimbazafy, manam-pahaizana manokana momba ny gidro ary manana ny mari-pahaizana PhD avy amin’ny Oniversiten’i Stony Brook, any New York. Mampianatra ihany koa eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Nilaza izy fa tsy dia mifantoka loatra amin’ny fikarohana ity Oniversite ity. “Ny ankamaroan’ny fahaiza-manao eto amin’ity Oniversite ity dia mpampianatra fa vitsy dia vitsy amin’izy ireo no manao fikarohana,” hoy izy. Vitsy ireo angon-kevitra misy raha mitaha amin’ny isan’ireo mpampianatra lazaina fa manana fahafahana hanao fikarohana na izany mpampianatra na mpikaroka eny amin’ireo rafi-pampianarana ambony ara-panjakana izay manao fikarohana tokoa, na ny fotoana lanian’izy ireo amin’izany fikarohana izany. Tamin’ny taona 1980, nisy tatitra ofisialy navoakan’ny fanjakana nilaza fa latsaky ny folo isan-jato monja izany isa izany.
Amin’ny ambaratonga rehetra, nilaza avokoa ireo mpikaroka niresahan’ny Mongabay fa ny sampam-pampianarana momba ny siansa any amin’ny Oniversite Malagasy, mbola lavitry ny fahamatorana fatratra sy hentitra ary ny fahombiazana ananan’ny rafi-pampianarana ambony misy any Amerika, Alemana ary Angletera izay nanatontosa fikarohana momba ny biôdiversite teto Madagasikara.
“Nanana fahafahana nianatra herintaona tany Angletera aho namita ny taona fahadimy (MSc),” hoy Julie Razafimanahaka, avy ao amin’ny Voakajy. “Ary heveriko fa misy tena misy fahasamihafana lehibe eo amin’izay nianarako teto sy ny nianarako tany. Farafahakeliny fony aho nianatra tany amin’ny oniversite teto Madagasikara, tsy ampy,” hoy hatrany izy.
“Na izany aza, efa mihatsara izany ankehitriny.”
Orkidea Malagasy tsy fantatra anarana. Sary nahazoana alalana tamin’ny Fikambanana Vahatra.
Vokatry ny tantara
I Frank Hawkins, talen’ny biraon’ny IUCN (International Union for Conservation of Nature) any Washington, D.C dia nandalo voalohany teto Madagasikara tamin’ny taona 1980 tany ho any, fony nanomboka nanalefaka ny fitokana-monina sy nandrava ny efitra sosialista ny fitondrana nentin’i Didier Ratsiraka tany amin’ny voalohandohan’ny taona nitondrany. “Zava-dehibe ny fahafantarana fa tany ho any amin’ny taona 1985 tany Madagasikara vao nisokatra tamin’ny firenena Tandrefana,” hoy izy. “Koa nandritra ireo folo taona voalohany na ny toy izany, nipetrahako tany Madagasikara, tena goavana ny fahalianana mahakasika an’i Madagasikara saingy tsy nisy nanana fifandraisana tamin’ny resaka siansa mifototra amin’ny biôdiversite tamin’ireo vondrona akademika Malagasy,” hoy hatrany izy.
Nandritra ny fitondran-dRatsiraka araka ny fanazavan’i Lucienne Wilmé, nohozongozonin’ ireo fironana samihafa nifanongoa i Madagasikara izay namparefo tanteraka ny rafi-pampianarana ambony. Etsy andaniny, raha sahirana tamin’ny fiatrehana ny fitomboan’ny fandoavana ny zana-bola avy amin’ny trosa vahiny ny fanjakana, etsy ankilany kosa nandidy ny fiatoan’ny fampidirana ho mpiasam-panjakana ny Banky Iraisam-pirenena. Ho an’ny Oniversiten’Antananarivo manokana, tsy nisy mpampianatra mpikaroka vaovao noraisina nandritra ny roapolo taona izany hoe nanomboka ny taona 1986 ka hatramin’ny taona 2006. Niteraka fahabangana ara-pifandimbiasana goavana teo amin’ny mpampianatra izany satria ny isan’ny mpianatra rahateo nitombo mihoatra ny avo roa heny tao anatin’izay fotoana izay.
Ankoatra izay, hetsika ara-politika hafa tsy maintsy natrehina tamin’ny taona 1975 ihany koa ny “fanagasiana” izay nahavita nanova tanteraka ny teny nenti-nampianatra tany amin’ny sekoly ambaratonga voalohany sy faharoa ho teny Malagasy fa tsy teny frantsay intsony. Ny tanjona tamin’izany ny hahatonga ny ankizy hahafehy tsara ny teny Malagasy sy ny teny Frantsay amin’ireo fiteny roa ireo ny fampianarana teny amin’ny Lycée. Rehefa nandeha anefa ny fotoana, nanomboka hita nazava fa nandeha haingana loatra ny fampiharana ny fanovana ka nahatonga ireo mpianatra niditra teny amin’ny anjery manontolo tsy voaomana hiatrika ny fampianarana amin’ny teny frantsay. “Raha tonga eny amin’ny Oniversite ianao kanefa mbola tsy mahafehy tsara ny teny hoenti-mianatra dia very fotoana fotsiny ” hoy Wilmé.
Jonah Ratsimbazafy, manam-pahaizana manokana momba ny gidro, dia nanomboka ny asa fikarohana an-tsaha tamin’ny alalan’ny fahaizana norantoviny tany New York, Oniversiten’i Stony Brook. Miasa ao amin’ny Oniversiten’ Antananarivo izy ankehitriny. Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay.
Voalazan-dRatsimbazafy fa ny tantaran’i Madagasikara amin’ny maha mitoka-monina azy sy ny tsy fahampian’ny famatsiam-bola azony dia namparefo ny sampam-pampianarana ary nampiadana ny fialana amin’ny fampianarana be fahatany ao anatin’ny efitrano fotsiny ihany ho amin’ny fandaharam-pianarana ara-tsiansa mifototra amin’ny fikarohana. 56 taona ny salan-taonan’ireo mpikambana ao amin’ny sampam-pampianarana eny amin’ny oniversitem-panjakana ao Madagasikara ary mihoatra ny ampahatelony no tsy nanana ny mari-pahaizana “doctorat” tamin’ny taona 2007 .
“Raha mpampianatra ianao, mila manavao ny fahaizanao manokana,” hoy Ratsimbazafy. “Mivoatra ny tontolo misy antsika. »Ahoana moa no ahafahanao mahafantatra ireo teknôlôjia vaovao raha toa ka tsy mifandray amin’izao tontolo izao ianao? Tsy manana olona halain-tahaka ny mpikaroka eto Madagasikara” hoy izy.
“Tsy asehoko olona intsony ny voka-pikarohako tany Madagasikara,” hoy izy nanohy, raha niresaka ny boky nosoratany momban’ny gidro tao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, fony izy tao amin’ny taona fahadimy. « Fanoritsoritana fotsiny no ao ». « oay, misakafo izy oay, mihira izy ». Tsy misy zavatra manery antsika hametraka petra-kevitra tao anatiny, hoy hatrany izy.
Hetsi-piniavana vitsivitsy toa an’ny Voakajy misy ireo efa naharitra mihoatra ny roapolo taona no nampihena tsikelikely ny lesoka. Nanomboka tamin’ny taona 1991 ka hatramin’ny taona 2007, ny fikambanana iraisam-pirenena tsy miankina “World Wide Fund for Nature” (Tahiry Iraisam-pirenena ho an’ny Harena Voajanahary), WWF. Nitantana hetsi-piniavana nantsoina hoe “Fandaharanasa Fanofanana momba ny Ekôlôjia (Programme de Formation sur l’Ecologie)” izay nanohana asa fikarohana momba ny fikajiana ara-tsiansa ho an’ny mpianatra Malagasy miisa 75. Niova ho fikambanana mahaleo tena antsoina hoe Vahatra izany fandaharanasa izany taty aoriana ka manohy ny fanohanana ireo asa fikarohana eo ambany fitarihan’ireo mpikambana tranainy nisitraka voalohany ny fandaharanasa. Misy vondrona hafa koa toy ny « U.S based Peregrine Fund » (Fonds Peregrine avy ao Etazonia) namatsy asa fikarohana tontosain’ireo mpianatra Malagasy manam-pahaizana momba ny vorona miisa eo amin’ny 24 eo. Ny iray amin’izy ireo dia tonga talen’ny fandaharanasa fikajiana ilay vorona manerana an’i Madagasikara ankehitriny.
Mpianatra maka ny mari-pahaizana Doctorat, avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo, mandray an-tsoratra ireo akoram-pahalalana eny an-tsaha tao anatin’ny dia nataony tany amin’ny Valam-Pirenena Andringitra tamin’ny taona 2008. Sary nahazoana alalana avy amin’ny Fikambanana Vahatra.
Vanim-potoana vaovao handraisan’ny Malagasy ny fitarihana?
Maro ireo Malagasy mpahay siansa no nahazo fampianarana tamin’ny biôlôjista tandrefana nandritra ny fahatanorany no lasa mpikaroka feno sy mahavita azy. Manana ny zo sy ny fahefana ilaina amin’izany asa izany. Amin’ity taona ity, Jonah Ratsimbazafy dia hanampy amin’ny fanomanana ny fifanakalozana traikefa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena any Toamasina, any amin’ny faritra atsinanan’i Madagasikara. Araka ny filazany, karazana kaoferansa izay tokony efa natao tany Amerika fahiny. Ratsimbazafy, mitarika ny fanambàrana angon-kevitra sy ny fanangonana ny fitaovana takiana mba ahatonga ny voka-pikarohana ho ekena eo anivon’ny fanjakana. Mitarika ny “Madagascar Lemurs Portal” izay natao hampiroboroboana bebe kokoa ny fiaraha-miasa ety eo amin’ny samy mpahay siansa sy ny mpanao pôlitika ary natao handrefesana tsara ny fahombiazan’ny asa manokana atao amin’ny faritra arovana.
“Efa 10 na 15 taona izay ireo mpahay siansa Malagasy no napetraka teo amin’ny toerana maha-mpitarika,” araka ny fanamarihan’i Hawkins avy amin’ny IUCN. “Mitaky fotoana izany maha mpitarika izany fa tsy afaka miandrandra ny fanekena anao avy hatrany ao anatin’ny vondron’ny mpampianatra mpikaroka maneran-tany ianao.” Manantena anefa i Hawkins fa hisy fiovana ihany ny tsy fifandanjana misy eo amin’ny famoahana asa soratra momban’ ny voka-pikarohana. “Tsy maintsy mamoaka voka-pikarohana ny vahiny satria ireny no manamarina ny fandaniana ny vola nomena azy,” hoy ny fanazavany. “Tonga tsy tapaka manatrika ny fikarohana ireo mpiara-miasa Malagasy saingy mila fotoana maharitra izay vao azo ny io fahaiza-manao io.”
Herman Rafalinirina, eo ankavanana, mamolavola fanadihadiana any an’ala, mikasika ny zara-ala any amin’ny faritra atsinanan’i Madagasikara. Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay.
Taranaka iray mialoha izao tsy nisy tanora Malagasy mpahay siansa nanana ny fahaiza-manao afaka nampifandray ny zavatra takian’ny voka-pikarohana akademika sy ny fanatanterahana fandaharan’asa fikajiana ny tontolo iainana, izay asa saro-pady tokoa. Ankehitriny anefa na betsaka aza ny sakana atrehan’izy ireo, ny asan’ny biôlôjista tahaka an-dRazafimanahaka sy ireo mpiara-miasa aminy no ahitana taratra tsara ny hery miasa mangina avy amin’ny siansa ara-pikajiana sy ny feon’ireo Malagasy manam-pahaizana manokana izay mandray fanapahan-kevitra ny amin’ny lalan-kizoran’ny fireneny.
“Inona no antony lehibe manosika anao hanao asa fikarohana?” hoy Herman Rafalinirina nanontany mpiadina iray mikasa haka ny mari-pahaizana PhD momban’ny gidro ao amin’ny Oniversiten’ Antananarivo, ao amin’ny sampam-pianarana haiharingarifahagola sy ny “anthropologie biologique.” “Ohatra, mandeha any anaty ala ianao, mandalina ny angon-kevitra azonao ary mamoaka ny voka-pikarohana avy eo. Tsara izany, saingy nahoana ianao no manao izany? Satria raha mifidy ny ho mpahay siansa ianao dia tsy maintsy miaro ny mponina eo an-toerana. Tsy maintsy manambara mazava tsara izay vokatra hitanao ihany koa. Firy amin’ireo vahiny no niverina tany amin’ny toerana nanaovany fikarohana ka nampahafantatra ny mponina eo an-toerana izay vokatra hitany rehefa namoaka ny voka-pikarohany izy ireo? « Ary izay indrindra no olana! Mandresy lahatra ny olona ianao miasa amin’ny fiarovana ny gidro ianao. Manao asa fikarohana eo an-toerana kanefa tsy miverina intsony ».
Ny Malagasy mpahay siansa kosa hoy izy, dia mba miverina ihany.
Nanangona : Nirina RAKOTOMIARINTSOA
Nandika teny : Jemima Johnson
Nosoratan’i Rowan Moore Gerety
Rowan Moore Gerety dia mpanao gazety sady mpanao fandaharana amin’ny onjam-peo any Miami. Raha hamaky misismisy kokoa momba ny asany ianao, jereo ao amin’ny www.rowanmg.com.
Ireo karazan-tsary hita ato, sary nalaina tao amin’ny faritra arovana manokana ao Andranomena, trandraka lehibe (tenrec) (Setifer setosus) mivalampatra eo ampofoan’i Voahangy Soarimalala ao amin’ny fikambanana Vahatra, mampiseho ny fomba fandrefesana azy amin’ireo mpianatra taona fahadimy avy ao amin’ny Oniversiten’Antananarivo. Sary nahazoana alalana avy amin’ny Fikambanana Vahatra.
“Cette article est apparu originnellement au site des nouvelles environnementaux Mongabay.com” avec un lien a l’article originelle: https://news.mongabay.com/2017/10/building-conservations-brain-trust-in-madagascar/
Eric Marcel Temba, mpianatra manomana ny fahazoana mari-pahaizana PhD amin’ny sampam-pianarana mandalina momba ny vorona, mampiasa ny solosaina (tsy vaovao fa efa niasa) nomen’ny mpiara-miasa iray avy any Angletera azy. Sary nalain’i Rowan Moore Gerety ho an’ny Mongabay.
Non classé	 16 avril 2018 R Nirina
FAMPIHAVANAM-PIRENENA: Tsy ho vita ao anatin’ny fotoana fohy
Anterivava : Maître Valisoa RAZAFIMAHATRATRA
Manana andraikitra amin’ny fanorenana indray ny firenena sy ny repoblika ny CFM na ny kaomity ny fampihavanana Malagasy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 13 avril 2018 lynda
MPANAO GAZETY SY NY MPITANDRO FILAMINANA: Hivoaka ny fifanaraham-piarahamiasa lasitra
Notontosaina ny 12 aprily 2018 ny fivoriana fahatelo niarahan’ny mpanao gazety sy ny mpitandro filaminana. Nandritra io latabatra boribory io no nandinihana farany ny votoatiny ny fifanaraham-piarahamiasa lasitra sy ny toro-lalana entina hanatsarana ny fiarahamiasa eo amin’ny mpitandro filaminana sy ny mpanao gazety. Continuer la lecture →